နေပြည်တော်အတွင်း Stay Homeမြို့များ ကိုဗစ်စည်းကမ်းများနှင့်အညီ သွားလာခြင်းမရှိပါက အရေးယူမည်ဟု စစ်ကောင်စီထုတ်ပြန် - Myanmar Pressphoto Agency
နေပြည်တော်အတွင်း Stay Homeမြို့များ ကိုဗစ်စည်းကမ်းများနှင့်အညီ သွားလာခြင်းမရှိပါက အရေးယူမည်ဟု စစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်
MPA Myanmar Naypyidaw News StayatHome
Covid_19 August 6, 2021 ·0Comment
နေပြည်တော်အတွင်း Stay Homeသတ်မှတ်ထားသည့် မြို့ သုံး မြို့အတွင်း နေ ထိုင်သူများအနေဖြင့် သြဂုတ်လ ၆ ရက် ယနေ့မှစ၍ ကိုဗစ်စည်းကမ်းများနှင့်အညီ သွားလာခြင်း မရှိပါက ဥပဒေအရ အရေးယူဆောင် ရွက်သွားမည်ဖြစ်​ကြောင်း အကြမ်းဖက်စစ်တပ် လက်အောက်ခံ နေ ပြည်တော်ကောင်စီရုံး၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
Stay Home သတ်မှတ်ထားသည့်မြို့ နယ် သုံး မြို့နယ်အတွင်း အသွားအလာကန့်သတ်ခြင်းများပြုလုပ်၍ check pointများထားရှိကာ ကိုဗစ် သတ်မှတ်စည်းကမ်းများနှင့်အညီသွားလာခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေး၍ လိုက်နာမှုမရှိသူများကို ဥပဒေအရ အရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
” ဒီနေ့မနက်ပဲ နေပြည်တော်ကောင်စီက စာထုတ်လိုက်တယ်။ Stay Homeမြို့တွေထဲ သွားတာလာတာတွေပေါ့။ အရင်က နေပြည်တော် အဝင်ပဲမရတာ ။ အထွက်ကရသေးတယ်။ ခုက Stay Home မြို့ကလူတွေ ခရီးသွားတာတွေ မရတော့ဘူး။ အပြင်ထွက်ရင် တစ်ယောက်ဘဲ သတ် မှတ်ထားတယ်။ ပိုရင်ဖမ်းမယ်။ ကျန်တဲ့ဟာတွေလည်းစစ်မယ်ပေါ့။” ဟု နေပြည်တော် ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် ဒေသခံတစ်ဦးက MPAသို့ ပြောသည်။
နေပြည်တော်အတွင်း Stay Homeမြို့များသို့ ဝင်ရောက်မည်ဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်အုပ် ချုပ်ရေးမှူး၏ နေထိုင်ကြောင်းထောက်ခံစာ ပါရှိ မှသာ ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုထားပြီး အဆိုပါ ထောက်ခံစာများပါ စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခင် Stay at Home အဖြစ် စတင်သတ်မှတ် ချိန်မှစ၍ ပညာပေးကာလအဖြစ် သတ်မှတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ယနေ့မှစ၍ သက်ဆိုင်ရာတည်ဆဲ ဥပဒေများဖြင့် အရေးယူများ စတင်ဆောင် ရွက်မည်ဟု ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ရေးသားဖော်ပြထားသည်။
နေပြည်တော်တွင်ကိုဗစ် ကူးစက်မှု နှင့်သေဆုံးမှုမြင့်တက်နေသည့် ဇမ္ဗူသီရိမြို့၊ ပျဥ်းမနားမြို့၊ လယ်ဝေးမြို့တို့အား Stay Home မြို့များအဖြစ်သတ်မှတ်ထားကာ ဇမ္ဗူသီရိမြို့ နယ်အတွင်း အတည်ပြုလူနာ ၃၀၀၀ ကျော်ဖြင့်အများဆုံး ဖြစ် သည်။
နေပြည်တော်အတွင်း သြဂုတ်လ ၅ရက် မနေ့ကထိ ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ ၁၀၀၀၀ နီးပါး ကူးစက်ခံထားရပြီး သေဆုံးသူ ၂၀၀ ကျော်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
#နေပြည်တော် #StayHome #အရေးယူမည် #သဘာဝဘေးစီမံဥပဒေ #COVID19 #MPA
SAC Announces Stay-at-Home Townships in Naypyitaw will be Punished if They Do Not Follow COVID-19 Rules
The SAC-controlled Naypyitaw Council Office announced that from today, August 6, legal actions would be taken against the people from three stay-at-home-imposed townships in Naypyitaw if they do not follow COVID-19 rules.
“The Naypyitaw Council issuedastatement just this morning. For commuters from the stay-at-home-imposed townships. Previously, only entrance to Naypyitaw was prohibited and exit was allowed. But now, people from stay-home townships cannot travel. Only one person is allowed to go out. If more than one go out, they can arrest them. They would also check for other things,” saidaZabuthiri township resident to MPA.
For entrance into stay-at-home townships of Naypyitaw, it is only allowed witharespective ward administrator’s recommendation letter and even the letter would be checked.
It has been the educating period from when the stay-at-home impose was first declared and taking actions by the existing laws would begin from today, the statement included.
Naypyitaw’s three townships with high COVID-19 infections, Zabuthiri, Pyinmana and Lewe, have been declared stay-at-home townships and Zabuthiri has seen the highest infections with over 3000 confirmed patients.
In Naypyitaw, there have been close to 10,000 new confirmed infected patients up to yesterday, August5and over 200 have died.
#Naypyitaw #StayHome #ActionsTaken #EnvironmentalManagementLaw #COVID_19 #MPA